सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो सुरु (फोटो फिचरसहित)
काठमाण्डौं,भदौं । सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) सुरु भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बिच सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनज्यूले एक्स्पोको उद्घाटन गरेका हुन् । नेपा...
काठमाण्डौ, भदौं । विगत १९ वर्षदेखि जीवन बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी आम जनमानसमा लोकप्रिय नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पोखरामा ‘ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन...
महोत्तरी,भदौ । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा गएराति करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा एकडारा गाउँपालिका–४ चकवागाउँ बस...
कावासोती,भदौं । पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुग्दा नवलपुरको पहाडी क्षेत्र द्वारीका स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । नगरपालिकाकै वडा भए पनि अझैसम्म विद्युत् नपुग्दा यहाँका स्थानीयवासी टुकीको भर...
कालीगण्डकी करिडोरमा स्थानीयको अवरोध पछि वैकल्पिक मार्गको अध्ययन शुरु
म्याग्दी, भदौ । कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा टावर निर्माणको वैकल्पिक मार्गबार...
काठमाण्डौंं,भदौं । फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) को सबै तयारी पुरा भएको छ । फर्नेक्सको आयोजक संस्था नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अनुसार एक्स्पोको सबै तयारी पुरा भएको छ । संघ...
विद्युतीय सामग्री नेपालमा नै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक संरक्षण दिन तयार छौ : अर्थमन्त्री खतिवडा (फोटो फिचर सहित)
काठमाण्डौ, भदौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा नै विद्युतीय सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक संरक्षण दिन सरकार तयार रहेको बएताका छन् । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको १० औँ साधारण सभा तथा...
दशैंको बेला सस्तो मेला, असोज २ गतेदेखि भृकुटिमण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला
काठमाण्डाौं,भदौ । दशैंको अवसर पारेर असोजको पहिलो साता राजधानीको भृकुटीण्डपमा स्टक क्लियरेन्स मेला आयोजना हुने भएको छ । असोज २ गतेदेखि ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलाको तयारी पुरा भएको आयोजक संस्था इभेण...
इलेक्ट्रिसियनलाई सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम
भक्तपुर,भदौं । कमलविनायक इलेक्ट्रिकल सप्लार्यसको आयोजनामा इलेक्ट्रिसियनहरुलाई सुरक्षा सम्बन्धि जनचेनता दिने उद्धेश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘इलेक्ट्रिसियन भनेकै गहन...
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघमा निर्वाचनको रौनक,दुई पदका लागि निवार्चन हुने संकेत
काठमाण्डौं,भदौं । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघमा अहिले १० औं वार्षिक साधारण सभा तथा चौथौं अधिवेशनको रौनक छाइरहेको छ । यहि भदौं २१ गते हुन गईरहेको अधिवेशनमा क्रमश अध्यक्ष, द्धितीय उपाध्यक्ष, महास...
बिजुली बत्तीले फेरियो स्थानीयवासीको दैनिकी
काठमाण्डौँ,भदौं । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ बुलमा विद्युत सेवा पुगेपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी बदलिएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने सो गाँउका ४...
सुन्दर यातायातद्धारा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा
काठमाण्डौ, भदौ । सुन्दर यातायत प्रालिले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्नका लागि सुन्दर यातायतले आज देखि चार्जिङ स्टेस...
अपाङ्गता भएकालाई सोलार वितरण
बैतडी,भदौंं । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं २ को कार्यालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क सोलार वितरण गरेको छ । लक्षित समुदाय सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत अपाङ्गता भएका सो वडाका २८ जना अपा...
विद्युतीय सामग्री आयात वर्षेनी बढ्दो, आ.व २०७५÷७६ मा ९२ अर्व बराबरको विद्युतीय सामग्री आयात
काठमाण्डौ, भदौ । नेपालमा विद्युतीय सामग्रीको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ । नेपालमा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि भए सँगै नेपालमा आवश्यक विद्युतीय सा...
स्वदेशमा नै सवारीसाधन उत्पादन सुवात गर्नु पर्छ :अर्थ मन्त्री खतिवडा
काठमाण्डौ, भदौ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा नै सवारीसाधन उत्पादन सुरु गर्नु पर्ने बताएका छन् । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो शो २०१९ को उद्घाटन क...